Ny fomba fiasa madinika amin'ny fifanakalozana Forex dia mety hanafoana ny risika fohy. | FXCC
fanabeazana - Lahatsoratra & torolalana - forex basics articles - Ny fomba fiasa madinika amin'ny fifanakalozana Forex dia mety hanafoana ny loza mety hitranga
Ny fomba fiasa madinika amin'ny fifanakalozana Forex dia mety hanafoana ny loza mety hitranga
Amin'ny maha-mpivarotra anay, dia mirehareha isika amin'ny famolavolana drafitr'asa momba ny bala amin'ny paikady izay manana fitantanana henjana / fanaraha-maso henjana sy fananarana. Na izany aza, ny soso-kevitra avy amin'ny lohateny, dia hoe misy ny fotoana ahitantsika tombony handosirantsika, mazava ho azy fa avelantsika hitranga izany, raha tsy miezaka ny hahazo tombony fanampiny.
Andriamatoa Alpha Prime. Ny fehezanteny dia avy amin'ny indostria fampiasam-bola, manoro hevitra fa ny mpanjifa dia manolotra finoana tanteraka amin'ny mpitantana ny volany, hampiasa ny fahamendrehany farany, hampiasa vola isaky ny misy na aiza na aiza hitan-dry zareo, tsy misy famerana. Na dia izany aza, ny fehezan-teny dia tsy mahazatra loatra, satria tsy misy amintsika tsirairay matoky tena, na mpitantan-bola, izay mety hampidi-doza ny zava-drehetra amin'ny iray amin'ireo soavaly iray, na ny dihin'ny kodiarana roulette, na dia fetsy dimampolo dimanjato aza , mena na mainty.
Ny mpiasam-bahoakam-pahefana alpha dia mbola manam-pikasana hiditra ao anatiny, tsy mirona amin'ny filaharam-piraisany amin'ny fananan'ny mpanjifany izy ireo. Mbola eo ambany fifehezana henjana sy fitsipika henjana izy ireo ary misy fepetra takiana, saingy mety hanosika ny sisin-dalan'ny drafitr'asa ara-barotra ataon'izy ireo, mba hifehezana ny tombony faran'izay ambony amin'ny paikady ara-barotra. Ity famaritana ankapobeny ity dia tokony hampiharina amin'ny fivarotana manokana samirery, ka noho izany dia ho hitantsika ny tombontsoa sisa tavela eo amin'ny latabatra ary mila manova haingana sy mianatra ny antony tsy tokony hisaorana io tombony io.
Ireo izay mandinika ny tsy fahampian'ny tombom-barotra dia mpandraharaha vaovao, izay mbola tsy tonga saina amin'ny zava-misy fa ho eo foana ny tsena, dia hisy hatrany ny fahafahana hafa hivarotra sy hahazoana tombony. Na izany aza, raha te handroso ny paikady ara-barotra, mandritra ny fotoana maharitra sy maharitra, dia tokony hanaiky ianao fa tsy ny anao ihany no misafidy ny tsy hampiasa paompy, tokony hampiasainao handraisanao ny marim-pototra sy ny toetra sy ny famaritana azy, hamerana ny tombom-barotrao ianao.
Ny famehezana ny tombony anananao koa dia andian-teny sy hevitra miavaka, maninona no hametrahantsika ny tombontsoantsika, nahoana no tsy mety ho tsy misy dikany izany? Mandratra ny tombom-baravantsika isika satria fantatsika fa mandritra ny fotoana lava kokoa ny fironana eo amin'ny tontolon'ny sehatra madinika sy macro-ekonomika, ny hetsika fampitaovana, indraindray ny tabataba azo tsapain-tanana, dia mety hisy fiantraikany lalina eo amin'ny tsipika ambany sy tombontsoa azo avy amin'ny varotra. Noho izany dia mety hiara-hivory amin'ny herisetra isika, fa amin'ny fomba mandaitra; Tianay ny handresy ny fatiantoka mety ho an'ny 2: 1 ary mety mety ho 0.5% ny kaontinay, raha te hahazo 1%. Manao izany isika satria ny tantara dia mampianatra antsika fa ny fanirian-dratsy dia hamono haingana ny kaontinao, ny asa aman-draharahanao ary ny hafanam-ponao.
Ao koa ny fanatanjahan-tena hafa iray hafa izay mendrika ny mandinika raha hitanao ny fivarotana mpivarotra vola izay naminavinao ny fitarihana marina, nalainao ny tombom-barotrao noho ny fahazoana tombom-barotra, fa ny tetik'ady dia mitohy amin'ny firy tampoka, ka mamela vola be voasambotra.
Ampahatsiahivo ny tenanao aloha; fa marina ianao ary ianao dia manan-jo handoavana ny tombony ho toy ny ampahany amin'ny drafitry ny varotra manontolo. Faharoa; Fantaro fa tsy dia fahita firy ao anatin'ilay orinasa ny pesta. Fahatelo; fa hisy, aorian'ny manaraka ny andro, ho fitarihana (ny fotoana izay ho sarotra ny haminavina). Ary farany, efa vita ho an'ny andro ianao izao; Mety efa nanangana ny sehatra hividy ny varotra ianao, efa niasa, efa nanankinanao ny tombony azonao, ary ianao dia manana toe-javatra tsara hivarotra indray ny ampitso. Ianao dia niasa toy ny matihanina matihanina, nahavita ny fomba fitsaboana faran'izay tsara anao amin'ny varotra forex, tsy te-hanimba ny drafitr'asa ara-barotra, ho an'ny fotoana voafetra.